तपाईंको आर्थिक कारोबार – Islam Guide
Category: तपाईंको आर्थिक कारोबार
जनवरी 21, 2018 Comments
इस्लामले आर्थिक कारोबारमा उच्च आचरण अपनाउने प्रेरणा दिन्छ इस्लामले जसरी आर्थिक लेनदेनलाई स्पष्ट पारेको छ, त्यसरी नै क्रेता-बिक्रेता दुवै पक्षलाई कतिपय उच्च आचरण अपनाउने प्रेरित गरेको छ, जस्तै… इमान्दारी- इस्लामले व्यवसाय र कारोबारमा इमान्दारितालाई अनिवार्य गरेको छ। चाहे ’em मुस्लिम होस् या गैर-मुस्लिम, ’cause मुस्लिमको व्यवहार इस्लामि विधान अनुसार हुनुपर्छ।…
जनवरी 20, 2018 Comments
जुवा-तास जुवा-तास भनेको के हो? कुनै दौड वा खेलकूद प्रतियोगितामा दुई खेलाडी वा दुई प्रतिस्पर्धी वा दुई दर्शक बीच शर्त लगाउनु र जित्ने पक्षले हार्ने पक्षको माल खाई दिन्छ। यसरी प्रत्येक सहभागी अरुको असफलताको लागि तात्पर्य हुन्छ र यो नै जुवा-तास हो। यसको हुकुम- जुवा-तास सदाको लागि अवैध छ। कुरआन…
अन्याय र गलत तरिकाले अर्काको माल खानु अन्याय गरेर कसैको अलिकति पनि धन-सम्पत्ति कब्जा गर्नु ठूलो पाप हो। अन्याय र अत्याचार अति घृणित कार्य हो त्यसैले इस्लामले यसलाई अवैध गरेको छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “अन्याय नगर, यसको ठूलो परिणाम कयामतको दिन चुकाउनु पर्नेछ।” (श्रोत-…
धोका र अज्ञानता धोका र अज्ञानताको अभिप्राय- यी यस्ता कारोबार र मालसामानहरु हुन् जसको ’boutमा केही जानकारी छैन वा शंकास्पद वस्तुहरु हुन् जसले गर्दा क्रेता-बिक्रेता दुवैमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ वा कसैमाथि अन्यय हुन सक्छ। इस्लामले यस्तो कारोबारलाई अवैध गरेको छ, यद्यपि दुवै पक्षको राजी खुशीले किन नहोस्। ’cause यसमा…
यदि कोही इस्लाम पूर्वदेखि नै ब्याजमा फसेको छ भने उसले के गर्नु पर्छ? उपर्युक्त कुरालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ… १- यदि ब्याज लिनु पर्ने थियो भने उसले इस्लाम अपनाउने वित्तिकै साँवा बाहेक अरु केही लिन पाउँदैन। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यदि प्रायश्चित गर्छौ भने तिमीहरुका लागि साँवा छ। न…
जनवरी 14, 2018 Comments
व्यक्ति र समाजमाथि पर्न गएका ब्याजका नकारात्मक प्रभावहरु- इस्लामले ब्याजको मामिलामा अति कठोरता आपनाएको छ, ’cause यसले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो संसारलाई तहसनहस र छियाँ-छियाँ पारेको छ, तीमध्ये केही यस प्रकार छन्… मालको विभाजनमा छिन्न-भिन्न र धनी गरीब बीच ठूलो खाडल- ब्याजले गर्दा धन-सम्पत्ति, समाजको एक समूहमा मात्र सीमित भएर…
ब्याजको परिणाम- १- ब्याजको कारोबार गर्ने व्यक्ति अल्लाह र रसूलको साथ युद्ध गर्छ, त्यसैले ऊ अल्लाह र रसूलको शत्रु हो। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यदि तिमीहरू ब्याजको कारोबार छाड्दैनौ भने अल्लाह र रसूलसित युद्ध गर्न तयार होऊ। यदि प्रायश्चित गर्छौ भने तिमीहरुका लागि साँवा छ। न तिमीहरू अत्याचार गर्ने छौ…
ब्याजको हुकुम- ब्याज खानु अत्यन्तै अवैध काम हो। इस्लामले ब्याजलाई सदाको लागि अवैध गरेको छ। यसलाई ठूलो पापको सूचीमा राखेको छ। अल्लाहले ब्याज खाने र त्यसको कारोबार गर्ने अपराधीलाई युद्धको चेतावनी दिनु भएको छ। इस्लाम पूर्वका धर्म शास्त्रहरुले पनि ब्याजलाई अवैध गरेका छन्, तर यी कुराहरु परिवर्तन भएकाले यथावत रुपमा…
ब्याज ऋणीले ऋणको साँवा बाहेक दिनु पर्ने थप रकमलाई ब्याज भनिन्छ। यो इस्लामि विधान अनुसार अवैध छ, ’cause यसमा अन्याय र हानि छ। हुनत ब्याजका धेरै किसिमहरु छन्, तर प्रसिद्ध र अति अवैध किसिम… ऋण र सापट बापतको ब्याज हो, किनकि यसमा खरिद-बिक्री केही पनि हुँदैन, तै पनि साहुले ऋणीमाथि…
तपाईको आर्थिक कारोबार अल्लाहले गाँस, बास र कपासकै पूर्तिको लागि मेहनत र मजदुरी गर्ने आदेश दिनु भएको छ। यी कुराहरु यसरी स्पष्ट हुन्छन्… जबसम्म मानिस मेहनत र मजदुरी गरेर कमाउन सक्षम छ भने उसले अरुसित मागेर खानु अवैध छ। जसरी अजिङ्गरको आहारा अल्लाहले पूर्ति गर्नुहुन्छ, त्यसरी मानवको आहारा पनि उहाँले…